Beerto caleenka dayrta | January 2020
Noocyada beerista ee toonta duurjoogta dacha
Editor Ee Doorashada January 29,2020
Ugu Weyn Ee Beerto caleenka dayrta
Talooyin ku saabsan beeritaanka dayrta khudaarta
Niyadjab kasta beerta beerta quruxda badan ee beerta qurxoon, sidaa daraadeed dhirta kobcaya, ubaxyo farxad leh, geedo farabadan oo miro badan leh ayaa u koraya ... Arag indhaha oo xanuun! Mid ka mid ah geedaha midhaha leh ee quruxda badani waa kaydi, waxay jecel yahiin indhahayaga ubaxyo jilicsan, iyo dhadhanka iyo dhadhanka khudaarta aan la mid ahayn. Khudaar ma aha geed gaaban, oo si taxadar leh ayaa naga abaalmariya, dadaalkeena, oo leh wax-soosaarkooda sare.
Sida loo quudiyo boorka kobaca dhaqso
Sidee loo daryeelaa Griffith begonia? Sharaxaada dhirta gudaha, beerashada iyo dhibaatooyinka suurtagalka ah
Geedka tufaaxa ee koraya oo leh awood heer sare ah - Darajada barafka
Calaamad u ah quraanjada iyo aphids: sida loo jajabiyo urur ku faraxsan si loo ilaaliyo dhirta?
Wareegaan aan qabyo ahayn oo aan caadi ahayn oo qurux badan
Abaabul geedo tufaax ah xilliga dayrta
Dahlia "Farxad farabadan"
Ujeedada kaliya ee ah digaagbuurta broiler waa in la helo qiyaasta ugu badan ee hilibka mudo gaaban, sidaas darteed kormeerka habraaca maalinlaha iyo bil kasta ee korodhka culeyska shimbiraha ayaa aad muhiim u ah. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad waqtigaa u sameyso isbedelada loo baahan yahay ee cuntadooda, si ay ula socdaan kulaylka iyo qiyaasta nafaqada. Read More
Sidee loo dhajiyaa dabacasaha dhulka hoostiisa? Goorma ayay u fiicantahay in tan la sameeyo?
Qodobbada waxtarka leh ee caleemaha fareebka, cuntooyinka kala duwan ee cudurada kala duwan
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Beerto caleenka dayrta 2020